नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): कृष्णबहादुर महराले समेत प्रचण्डको साथ छोडेपछि !
कृष्णबहादुर महराले समेत प्रचण्डको साथ छोडेपछि !
'समय सधैं आफ्नो काबुमा रहँदैन।' यो सत्य यतिखेर एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' का हकमा लागू भएको छ। पार्टीभित्र कुनै समयका प्राधिकार प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आएको लामो समय नबित्दै पार्टीभित्र झन्पछि झन् एक्ला बन्दै गएका छन्। मोहन वैद्य पक्षधरको असहमतिका बाबजुद पनि आफ्नो पहलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएर अढाइ महिना पनि त्यो कुर्सीमा टिक्न नदिई लज्जाजनक ढंगले फिर्ता बोलाईएका कृष्णबहादुर महराले समेत प्रचण्डको साथ छोडेपछि उनको हालत पार्टीभित्र दयनीय बन्दै गएको छ। स्रोतका अनुसार महरालाई गृहमन्त्री बनाए पनि 'कमिसन'को खेल नमिलेपछि प्रचण्डले उनको राजनीतिक जीवन नै धरापमा पारिदिएर फिर्ता बोलाएका थिए।
प्रचण्डले आफूलाई बदनाम गराएको थापा पाएपछि महराले उनको खरो विरोध गर्न थालेका छन्। तर, विरोधै गरे पनि वैद्य पक्षले तत्कालै विश्वास नगर्नाले महरा प्राविधिक रूपमा प्रचण्ड खेमामै रहेका छन्। स्रोतका अनुसार ५५ लाख रूपैया147को थैली बुझाएर केन्द्रीय समिति बैठकको मुखैमा प्रचण्डले पार्टी प्रवक्ता समेत
रहेका दीनानाथ शर्मालाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सफल भए पनि केही दिनयता शर्मा भट्टराई निवास सानेपा धाउन थालेका छन्। सानेपा पुगेर शर्माले भट्टराई समक्ष मैले तपाईंलाई छोडेको होइन भन्दै प्रचण्डविरुद्ध बयान दिन थालेका छन्। शर्मा 'जता मल्खु उत्तै ढल्कु' भन्ने उखान जस्तै छेपारे प्रवृत्तिका व्यक्ति भएको चर्चा यतिबेला माओवादी पंक्तिमा चल्न थालेको छ। भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएपछि शर्मा 'यु टर्न' को तयारीमा लागेको बताइन्छ।
एक समयमा प्रचण्डको फोटोकपीकै उपमा पाएका नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्डलाई त्यागिसकेका छन्। वैद्य–भट्टराई क्याम्पमा लाग्दा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पाउने भएपछि श्रेष्ठले प्रचण्डलाई त्यागिदिएका थिए। प्रचण्डको हनुमानका रूपमा आफ्नो परिचय बनाएका पोलिटब्युरो सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत पनि पछिल्लो समयमा प्रचण्डसँग 'बेखुश' रहँदै आएका छन्। क्षमता केही पनि नभए पनि प्रचण्डलाई स्वस्ती गरेकै कारण उनी स्वास्थ्य मन्त्री बन्न सफल भएका थिए। मन्त्री भएर कुनै काम देखाउन नसकेपछि पार्टीभित्रबाट बस्नेतको चर्को आलोचना भएको थियो। प्रचण्डले बस्नेतलाई मन्त्रीबाट हटाएपछि उनकी श्रीमतीलाई राज्यमन्त्री बनाउने प्रण गरेका थिए।
प्रचण्डले उनकी श्रीमतीलाई राज्यमन्त्रीमा सिफरिस पनि गरेका थिए। तर, प्रचण्डले सपथका लागि अडान नलिएको भन्दै बस्नेत टाढिन थालेको स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार महरा आफूसँग टाढिएको सुइँको पाएपछि प्रचण्डले उनलाई सँगै मलेसिया लैजान चाहेका थिएनन्। छोरा प्रकाशलाई नै लैजान चाहेका थिए। तर महरालाई नलगे त्यसको सन्देश झन् गलत जाने भएकाले बाध्य भएर लगेको बताइन्छ। महरालाई सँगै लगेर आफ्नो पक्षमै लागिरहन सम्झाउने योजना पनि प्रचण्डले बनाएको नयाँ बजार निकट स्रोतको भनाइ छ। प्रचण्ड–महराको एक्कासी भएको मलेसिया भ्रमणका कारण अझै खुलेको छैन। विगतका सहकर्मीबाट दिनदिनै एक्लिँदै गएपछि प्रचण्डको मदिरा सेवनको प्रतिशत बढेको छ। 'उनी प्रत्येक दिन एक्लै भए पनि मदिरा पिउने गर्छन्। त्यसपछि छतमा गएर लामो समयसम्म एक्लै टहलिन्छन्,' स्रोत भन्छ, 'उनलाई मदिरामा साथ दिन प्राय वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, अजय सुमार्गीहरू आउँछन्।'
के गर्लान् प्रचण्डले
मलेसियाबाट फर्के लगत्तै प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तुरूप फालेर प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा रोक्ने प्रयासमा लाग्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। त्यसका लागि प्रचण्डले यहाँ रहेका आफ्ना भक्तहरू वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटालाई शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने खेस्रा बनाउन लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिए आफू र आफ्नो पार्टी झन् 'कर्नर' मा पर्ने भएकोले जतिसेकै तिक्तता बढे पनि भदौ १४ अघि उनको राजीनामा रोक्ने योजनामा प्रचण्ड लागेको बुझिएको छ।
स्रोतका अनुसार खनाल सरकार जति आफ्नो 'फेवर'मा काम गर्ने अर्को सरकार बन्न नसक्ने निचोडमा पुगेर प्रचण्डले खनाललाई राजीनामा दिनबाट रोक्ने येाजना बनाएका हुन्। शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने कुनै तुरूप फालेमा खनालले पनि राजीनामा रोक्न सक्ने बताइको छ। त्यसका लागि खनालले आफूलाई सहज हुने बाटो पनि राखेका छन्। उनले भदौ २८ सम्म शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने खाका र प्रतिबद्धता माओवादीले नल्याए राजीनामा दिने बताउँदै आएका छन्। त्यसैले माओवादीले त्यो खाका र प्रतिबद्धता ल्याए उनको राजीनामा रोकिन सक्ने सम्भावना उतिकै छ। 'अन्तिममा खनालले राजीनामा दिएनन् भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ,' बालुवाटार निकट स्रोतले दृष्टिलाई बतायो। तर, माओवादीको भुलभुलैयामा लागेर राजीनामा दिएनन् भने खनालको विश्वसनीयता भने झन् गुम्दै जाने निश्चित छ। भदौ २८ सम्म खनाल नेतृत्वकै सरकार राखेर त्यसपछि आफूले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने प्रचण्ड योजना रहेको छ।